अनन्त् त केपी ओलीलाई भिम रावल गलपासो, अध्यक्षमा उमेद्बारी घोषणा गरे
नेकपा एमाले’को दशौं महा’धिवेशनमा अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र डा. भीम रावल’बीच प्रति’ष्पर्धा हुने भएको छ । दुई नेता’बीच चितवन’मा हुने महा’धिवेशनमा अध्यक्ष’का लागि प्रति’ष्पर्धा हुने भएको हो ।
मङ्लबार, मंसिर ७, २०७८ ११:४९
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमाले’को दशौं महा’धिवेशनमा अध्यक्षका लागि केपी शर्मा ओली र डा. भीम रावल’बीच प्रति’ष्पर्धा हुने भएको छ । दुई नेता’बीच चितवन’मा हुने महा’धिवेशनमा अध्यक्ष’का लागि प्रति’ष्पर्धा हुने भएको हो । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
ओली अध्यक्ष’मा दोहोरि’ने उनी निकट’स्थहरुले सार्वज’निक रुप’मा बोल्दै आए’का छन् । ओली स्वयंले पुनः अध्यक्ष बन्न विधान महा’धिवेशन’मार्फत् विधान संशोधन गराइ’सकेका छन् ।
आजै एमा’ले उपा’ध्यक्ष डा। भीम रावल’ले अध्यक्षमा उम्मेद’वारी घोषणा गरे’का छन् । उन’ले रिपोर्ट’र्स क्लब नेपाल’मा पत्रकार सम्मेल’न गरी उम्मेद’वारी घोषणा गरे’का हुन् ।
ओली एमाले’का वर्त’मान अध्यक्ष हुन् । उनी दुई’पटक प्रधान’मन्त्री भइसके’का छन् । कम्यु’निस्ट आन्दोलन’मा लामो अनु’भव सँगाले’का ओली एमा’ले स्थायी कमि’टी सद’स्य हुँदै अ’ध्यक्ष बने’का थिए ।
विगत’मा गृह’मन्त्री, उपप्र’धान तथा पररा’ष्ट्रमन्त्री समेत बनेका ओ’ली कडा बोली’को पहिचान बनाउन सके’का छन् ।
रावल पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन् । उनी विगतमा
पर्यटन’मन्त्री समेत बने’का थिए । एमाले उ’पाध्यक्ष रहेका राव’ल लामो समय पार्टी’को महत्व’पूर्ण कमिटी’मा रहे । उनले विद्यावा’रिधी गरेका छन् । विगत’मा माधव’कुमार नेपाल’सँग नजिक रहे’का रावल एमाले विभा’जन हुँदा नेकपा एस’मा गए’नन् ।